इस्लिङटन कलेजमा रोजगारीसहितको एमबिए कार्यक्रम - Naya Patrika
तरकारीमा वार्षिक ५५ करोडको विषादी प्रयोग
बजेट संशोधन माग गर्दै दुई प्रस्ताव दर्ता
दाईजो मागेर आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने एक पक्राउ
दुई विद्यार्थीमाथी छुरा प्रहार
पार्टी एकताको मिति १४ गते तोकिन्छ : प्रचण्ड
टिपरको ठक्करबाट दम्पतीको मृत्यु
बुटवलमै खोप भण्डार केन्द्र
१५ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबारमा भारी गिरावट
तानाशाहीको लक्षण अझै देखिन्छ : प्रधानमन्त्री
इस्लिङटन कलेजमा रोजगारीसहितको एमबिए कार्यक्रम
नयाँ पत्रिका | पुष २८, २०७४
कमलपोखरीस्थित इस्लिङटन कलेजले अनुसन्धान रोजगार सहितको एमबिए कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कलेजले चीन र थाइल्याण्डमासमेत अतिरिक्त समय अध्ययनको व्यवस्था सहित दुई वर्षे एमबिए कोर्ष सुरु भएको जानकारी गराएको छ ।
वेलायतको लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटिको सम्बन्धनमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबिए कार्यक्रम सुरु भएको हो । सोही कोर्ष अध्ययनपछि नेपाललगायत विश्वका कुनै पनि मुलुकमा व्यवसाय अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सहयोग हुने कलेजका अध्यक्ष तथा सिइओ सुलभ बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
अनुसन्धानमा आधारित दुई वर्षे कोर्ष अन्तर्गत नेपालबाट विदेश निर्यात हुने र विदेशबाट नेपाल आयात हुने सामाग्रीको विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गर्नु नै कोर्षको विशेषता रहेको उनले जानकारी गराए ।
उनका अनुसार नेपालको बैकिङ, अर्थ र व्यापारिक क्षेत्रको विषयमा अध्ययन गरी व्यावसाय सञ्चालन गर्न सहजता हुनेछ । देश र विदेशको सम्पूर्ण व्यावसायीक विषयको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने एमबिए कार्यक्रम नेपालमा पहिलो भएको कलेजको दाबी छ ।
यो विषय चीनको अलिवावा डट कम र युनिभर्सिटी अफ द थाइल्याण्डको चेम्बर अफ कमर्शसँग सहकार्य गरिएको छ । पहिलो वर्ष लन्डन मेट्रोपोलिटियन युनिभर्सिटीको कोर्षसँगै चिनियाँ भाषाको एचएसके तेस्रो लेभलको भाषा सिक्नुपर्छ ।
भाषासँगै अलिवावा डट कमकाविज्ञ र त्यससँग सम्बन्धित विज्ञसँग तालिमको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल र विश्वको आयात र निर्यातको अवस्था कस्तो छ ? नेपालको बजार बिस्तारका लागि अन्य मुलुकसंग कसरी सम्भव छ ? लगायतका अनुसन्धानात्मक विषय सिक्ने चाहना यो कोर्षले पुरा कलेजको दाबी छ ।
चीनमा अध्ययन सम्पन्न गरेपछि दुई साता थाइल्याण्डमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ । दुई वर्षीय कोर्ष सकेपछि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कि विदेश जाने ? भन्ने विषय छनोट गर्ने अधिकार विद्यार्थीलाई भएको कलेजले जानकारी गराएको छ ।
अनुसन्धानमा आधारित विषय भएकोले पहिलो वर्ष २० जना विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेछन् । अध्ययन गर्न पाँच लाख ५० हजार र चीन र थाइल्याण्डमा अतिरिक्त कोर्ष अध्ययन गर्न करिब ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने कलेजले जनाएको छ ।
नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार